EyoMsintsi 12, 2018 admin
Huobi athole onelayisensi exchange crypto Japanese BitTrade
Huobi Group ukwandisa iinkonzo zalo eJapan nge an deal lokuchaphazelelka ukuthenga yendawo exchange cryptocurrency mvume BitTrade. BitTrade kungoku enye 16 ukutshintshiselana mvume eJapan kwaye ulilungu le-Japanese Virtual Currency Exchange Association.
Igosa lezeMali eliyiNtloko Huobi kaThixo, Chris Lee, amazwana ekufunyanweni: “Sesimeni owayedlala ubunkokheli BitTrade kunye ilayisenisi yayo evunyiweyo ngurhulumente-Japanese, nje kwasekuqaleni oku xa sijonge ukuba ukukhula BitTrade zibe umdlali njengezona lwiimi ziveleleyo kwimarike cryptocurrency Japanese.”
Iinkampani ezinkulu crypto enza iqembu elilwa DC
A Inani mali blockchain, ukutshintshiselana kunye zokuqala uceba ifuna Washington, DC imithetho kunye ezintsha Blockchain Association. Lo mbutho elitsha zigxininisa kutshintsho olumalunga zombini imfundo osemthethweni njengenxalenye yeenzame bunjani ubudlelwane phakathi zokuqala crypto imithetho, elikhuthaza ulawulo olufanelekileyo. Coinbase, Circle, Digital Currency Group, Polychain Capital and Protocol Labs phakathi kwamalungu okuqala Lo Mbutho uya.
Enye yabasebenzi yokuqala Lo Mbutho uya kubizwa owayesakuba yeeNgwevu ukuhlangula ngokuthi kunye Overstock.com blockchain lobbyist ogama Kristin Smith. Waye waxelela Post ukuba angathanda “aqondise” umbutho njengoko iqala ngaphandle, bathi, “Ndiye ndichithe ixesha elininzi Wenza uninzi umsebenzi wemfundo esisiseko kulo isithuba … Ndivuya yimincili ingqalelo kuphela kule miba.”
Ingxelo Daily Market Kraken for 11.09.2018
Criminal emva $ 1.8M cryptocurrency ubusela ejongene 10 iminyaka
Justice kuye kwaphumelela ukuba ulixhoba zibulawa ukuphanga, njengoko indoda emva $1.8 million ukubiwa kwemali virtual kulindeleke ukuba agwetyelwe 10 iminyaka emva kwezitshixo. Ngethamsanqa, ekugqibeleni ixhoba babaleka babathimbileyo bakhe. umenzi wobubi, Louis Meza, yobudala 35, liyi- “abahlobo” kunye nexhoba kwaye wayesazi ukuba isixa esikhulu kaEtere agcinwe kwiwalethi yakhe endlwini yayo. Meza, yaye 3 abantu balo yakhe inkunzi ixhoba.
Izaphuli-mthetho wabeka hood phezu kwentloko yexhoba babamba iiyure eziliqela. Anyanzela lowo ukuba anike phezu izitshixo zakhe ekhaya kwakunye “keys crypto” (ulwazi olufunekayo ukuze ufumane ufikelelo isipaji sakhe cryptocurrency.) Izaphuli-mthetho koko waziqhekeza endlwini yexhoba waza wayiba imilonde-memory stick aqulethe crypto yakhe. Ngelishwa ngenxa hoodlums, babanjwa kwi zokucupha yokuzonwabisa wenza ulwaphulo. Ixhoba wakwazi ukubaleka abaleke ukuya uzithenge ivenkile ekufuphi nalapho wabiza 911. Manhattan District Attorney uKoreshi phele Jr. wathi “Louis Meza wahlela i-21 stick-up. Ke abaphandi-21 bazisa kuye ngokukhawuleza ukuze ubulungisa, bakhusela enetyala lwembonakalo kwindawo engaphuhliswanga yomthetho.” Louis Meza iphinde yayalelwa ukuba aphulukane ~ $ 100,000 ezixabisa zeziliphu SALT & 84 bitcoins (~ $ 500,000). Ekugqibeleni, ixhoba ukubaleka ngokukhuselekileyo wabuya wachacha cryptocurrency yakhe.
Jeffrey Francis · EYOMSINTSI 6, 2018
Hey Daily Team Altcoin, Toda...